Request Big File - MYSTERY ZILLION
Request Big File
March 2011 edited April 2011 in Member ဆိုင်ရာ
ဒီနေရာလေးမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ ဖိုင် ကို Download link နှင့်တကွ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ ဒေါင်းဖို့ခက်တဲ့ဆိုက်
1 * Download Link ပြည့်စုံစွာပါရှိရမည်။ Active Link ဖြစ်ရမည်။
2* နိုင်ငံရေးနှင့်မလွတ်ကင်းသောဖိုင်များ။ ညစ်ညမ်း ဖိုင်များကို ဒေါင်းမပေးပါ။
3* မိမိအားဆက်သွယ်နိုင်မည့် Email Address ပါရမည်။
အပေါ်ကရေးထားတဲ့ အချက်တွေကိုတော့ပြည့်စုံစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖိုင်တွေကိုကျွန်တော် ခွဲပြီး ပြန်ဒေါင်းဖို့လွယ်
တဲ့ Host တစ်ခုခုမှာ တင်ပေးပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာ လာယူဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းလာယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အချိန် အနည်းဆုံးသုံးရက်တော့ စောင့်ရပါမယ်။ ဒီပိုစ်အောက်မှာ ရေးပြီးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆိုက်ကတော့မကြီးပါဘူး ။ ဒေါင်းရခက်တဲ့ wallpaper link လေးတွေပါ ။ mediafire မှာပြန်တင်ပေးစေလိုပါတယ်:cool:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော်ဘာသာဒေါင်းတာမရလို့ ။ အခုမှဘဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်:cool:
If you thank me, give me reputation+
InJ3ct0r wrote: »
သည်ယုန်မြင်လို့သည်ချုံထွင်ချင်သူကြီးရေ :P
သူများအကျိုးဆောင် ကိုယ်ကျိုးအောင် တဲ့... တော်ပါပြိစိတ်ကုန်တယ် တောထဲကသစ်ပင်ပေါ်မှာဘဲသွားနေတော့မယ် :cool::cool:
ကျေးဇုူးပြု.ပြီး mediafire site မှာ files များကို split လုပ်ပြီးပြန်တင်ပေးစေလိုပါတယ်။
အဲ့ဒါလေးတွေကို ကူညီပေးပါဦး။ အပြင်မှာလာယူပါ့မယ်။
E-mail => htetnaing90[@]gmail[.]com
Phone No => 09-5107137
ဒါဆို Anime တွေအကုန်ဆွဲခိုင်းရမယ်။ ပြီးရင် Mediafire နဲ့ပြန်တင်ပေး Ok? :biggrin::biggrin:
<p.s. Morris သဘောတူလား? All files must be in 720P>
Don't Download for Movies files & Cartoon files .. ok?
SMF မှာလို Smite လို့ရရင်ကောင်းမယ်.. :mad::mad:
နေအုံး .. နင့်ကို ကြီးကြီးမားမား ဒေါင်းခိုင်းဖို့ရှာရမယ်. :rolleyes::rolleyes:
အကို ဒီ file များအား download ဆွဲပေးနိုင်မလား။ http://www.filestube.com/bd84ce7ece11418103e9,g/Trainsignal-70-640-Windows-Server-2008-Active-Directory-Training-DVD1-LiBiSO.html
Agree with ya .. :P
အကို....အဆင်ပြေမယ့်နေရာနဲ ့အချိန်ကိုပြောပါ။ တနင်္ဂနွေ 12 နာရီနောက်ပိုင်း ဘယ်အချိန်လောက်ရမလဲ။